अनन्तगोपाल रिसालका रचनाहरु: September 2014
वेश्याको व्यथा, विवशता, धर्म र सँविधान !
वेश्याको विवशता, व्यथा, धर्म र सँविधान !
मेरो जवानी र रँग - १
सौतेनीका दाज्यू मिली बैना सौदा गरे,
धर्म पाप बिर्सिएर - लूटीएछु भरे,
चौध बर्ष पुगेकि थेँ, बेचिएकी चेली,
किताबै पो बन्छ सुन, खण्ड-काव्य ठेली !
गाऊँ बाट लगे टाढा, खै काँ बिरानोमा,
चीसो छिँडी घाम छैन, रूँन्थे भक्कानोमा,
सडकमा उठीवास, ग्राहक हुन् डेरा,
घर्का ग्राह भन्दा भिन्दै नाता बस्यो मेरा !
मान बेच्छन् ईमान बेच्छन्, मैत्री बेचिदिन्छन्
देशै लूटी, गरीबको आस्था किनीदिन्छन्,
लूटेराले परिवार, सँस्कार् खोसीदिए,
मुटु बेच्छन्,फोक्सो बेच्छन्, मलाई बेचिदिए !
नदी खोला ताल हूँ म, ढल मिसाई दिए,
नपढेकी अल्लारेलाई लूटी फसाई दिए,
जवानी यो टिक्ने थियो, पहाडकै छेऊ,
सोच्न सक्ने बुद्धि थे न, माफी गरिदेउ !
कलिली थेँ विचारमा, विश्वास र माया,
हिमालका स्वच्छ हावा, पत्यारको छायाँ,
सुन्दरको सपनामा कुदृष्ट्रीले छोप्यो,
भर्खरकी छोरीलाई छूरै छूरा रोप्यो!
शरीर यो मासु मेरो, रक्त पिण्ड चाह ,
'ईश्वर छन् मेरा भित्र' सुनि-दिन्छन् राह !
सूर्योदय सँग पैले धूप बत्ती गर्छु,
जानी जानी होम्मिएर दिन रातै मर्छु !
नाताले नै झुक्काएर बेच्यो पसलमा,
यौटी दिदी छिमेककी रैछिन् असलमा,
सन्तानको ईच्छा रैछ, बाँझी तर भाग्य,
माया गर्थिन् मनै मन, मिजासकी योग्य!
गाली गर्छन् अरू मलाई विवशकी वेश्या,
ठाँट गाडी पठाऊछन् कति गर्छन् ईर्ष्या,
लुकाएर राखेकी छु वेवाऋषे छोरी,
'देखाउँला बाबा तिम्रा', भन्दै 'भोलि भोलि'!
अज्ञानी र व्यभिचारी, नशामा छन् व्यस्त,
बलत्कार गरी लूट्छन् जवानी भो ध्वस्त,
घरकी छाडी, 'राम्री पाएँ', धेरै कुरा गर्छन्,
जन्मन्छन् ती गल्ली भित्र कुक्कुर् सरी मर्छन्!
साँझ पर्छ अन्धकार अन्धाधून्ध आशा,
नेता पनि आऊछन् कोही फाल्तु बार्हैमासा,
लूटिएकी बेसहारा केही बाँकी छैन,
घरकी छोरी सम्झिएर कहीँ भागी गैन !
टाढा देशका आऊँदैनन्, शत्रू सरी मार्न,
कवितामा पोखीदिन्छु दुखः पीर टार्न !
हराएकी लूटीएकी, बिते वर्षौँ रोई,
स्वजन ती दर्शक हुन् खोज्ने छैन कोही,
'आशा' छोरी तिनै रैछिन् जीवनको कथा,
कति सुन्नु कति रूनु अभागीको व्यथा?
मेरा हितैषीहरू - २
हिन्दू अाउँछन् मूसल्मान ईसाई र जैन,
सँविधान सरी मेरा 'छ सय एक' ऐन,
मासू चूरोट रक्सी केही खान जान्दिन म,
छोरीलाई सम्झिएर मर्न चाँदिन म !
सीतामाता झुक्काएर, राक्षसले ताने,
राम थिए उन्को बरा! मेरो काँ छ जाने?
राम नाम लिन्छु कठै, शरीर यो पापी,
मलाई भो नछुनु है, दूर राख नापी !
टुहुरो म आमा बाबु द्वन्दले नै काट्यो,
दैवले नि टाढा राख्यो, जीवनको बाटो,
छैन मेरा साथी सँगी, ग्राहकको खोजी,
भिख माग्ने गरीबको - छैन रोटी रोजी ।
बलात्कार हटाउँदैछु, हातपात किन?
पैसा तिरी प्यास मेट, घरघर्को ऋण,
हाम्रा गुण उपकार, छैन भन्नेहरू,
भाग्यमानी रै छौ बरा,पठाईदेऊन अरू !
तिम्रै कृपा करूणामा छोरी ठूली हुन्छे,
भोलि पर्सी पढाउँदै कलेज जाने हुन्छे,
मेरो दुखबाट ऊस्लाई टाढाटाढा राख्छु,
'बचाईदेउ राक्षसबाट' यौटै भीख माग्छु !
जीऊ छिया छिया मेरा, कति टोके घाउ,
सबै दर्द पचाएर, पस्की हाउभाउ !
फसाऊँछु राक्षसझैँ, माया मोह डाली,
हँसिला ती मुहार छिन्, सम्झिन्छु म खाली !
छूवाछूत मान्दैनन् रे! शरीर् भरी चुन्छन्,
रक्तश्राव हुँदा पनि देहलाई दुन्छन् !
पशुबरू नियममा बस्छ पग्लीदैन,
राक्षस यी पापी दुष्ट, भन्न सकिँदैन !
कति घर बिग्रिसके आँशु धर धर,
रखौटी र नाठो खोज्ने ल है कठै बर
बरू आउ तिम्रा लागि म छु प्रेम भरे,
शरीर यो मर्ने रै छ , गन्हाउँछ मरे !
अन्ध बन गन्ध लग, समाज यो ध्वस्त,
एडस् तर नसरून् है सुरक्षित वस्त्र,
सँयमको पाठ पढुन् व्रत मेरो यही,
छोरीलाई थाहा दिन्न जस्तै रोई रोई!
खर्च निक्कै बढेका छन् लिप्स्टीक् पाउडरले
छाला रँग चाऊरिँदै छ, अँग भँग गर्दे !
कस्तो कथा कस्तो मर्का, त्यसै नघिनाऊ,
मान्छे बिग्रे -दूर्दसाले, सोच नबनाउ !
काम-रोग लाग्नेहरू, खर्च ज्यादा, दाम,
औषधी झैँ बनेकी छु, डाक्टरको काम!
एक दिन् त आफ्ना लागि घुम्छु आशा सँग,
मनकी मुटु आधार छ्यौ, कति खुसी दँग !
सुन्दर भविष्यका सपना- ४
अनुराधा दिलमाया सीतादेवी काँ छ्यौ?
मेरो हालत यो बुझ, छोरीलाई राख्छ्यौ?
भविष्य छ धन्य अब गाऊँ फर्की सकेँ,
नयाँ घर अवकाश, ऋण तिरी सकेँ !
आफ्नै जीउ छुन पनि कति घिँन मानेँ,
हुतिहारा सर्बाहारा पापी रैछु ठानेँ,
यौटै मुटु जोगाऊन आत्मालाई बेचेँ,
आफू भित्र फर्किएर बल्ल बुझेँ देखेँ !
बल्ल भयो छुटकारा, तिम्रो सेवा गर्छु,
धन्य आमा सराप यो श्रद्धा गरी मर्छु,
हिमालकी शुद्ध पानी खोलै खोला बगेँ,
धोका दियो जीन्दगीले, जत्ति सक्दो लगेँ
कसैसँग रीस छैन, रीस ऊठाऊँदिन,
अरूको वा! ऊनन्ती भो डाहा लिँदै लिन्न,
आफ्नो दोष हेर्नलाई ऐना राखेकी छु,
सेवा मेरो जीवन हो, काखी च्यापेकी छु!
सागरमा पुग्नु पर्ने शहरको अन्ध,
कताबाट ऊछिट्टिएँ, बग्न छाडेँ गन्ध,
ईश्वरले सुनिदेला पवित्र छन् कथा,
गँगा बन्ली छोरी मेरी - गनाउने व्यथा !
छोडी जाने शरीरमा हर्ष कति गर्न्ु?
प्राणी आत्मा रैछन् भने - शोक कीन भर्नु ?
साधुबाट सिक्दैनौ त वेश्याबाट सिक,
शरीर, मन् बुद्धि बाट नराम्रा छन् ? झिक !
एकएक गरी ऋण तिरेँ भागी आईन,
विदेशैमा भए पनि मागी खाईन !
'छिःटा' मेरो नामलाई सीता बनौँला,
पढाएमा छोरी बन्छन् फूल सुनौला !
यौटै प्रेमी राख्यौ तर दुख दिनु भन्दा
चारै वटी राख प्यारी कालो भित्र पर्दा !
रखौटी र नखौटीको खोट बुझ यति,
आफ्ना दर्द बोकी हिँड्छे, जान्दिन क्यै क्षति !
हाम्रा लागि कस्ले अब शास्त्र बनाऊँछन् ?
रोग लागे अस्पताल हेरचाह गर्छन्?
६०१ मात्रै हैनन्, छ हजार छ ,
एक एक लाई चिन्छु कस्ता को को र छ !
अभागीको जन्म रैछ जीवन यो चोला,
टुकुचा र नाल जस्तै गन्हाऊने खोला,
भित्र रोग कति होलान्, भत्किएको घर,
विना सर्त स्वार्थमा म छुन्न कोही तर !!
नाँगिएको पूर्व ईतिहास - ३
मेरा पनि तिमी जस्तै आमाबाबु थिए,
झगडा र यूद्धकाल, मिली बसेका थे,
भर्खरै कै थिएँ अरे, तीन मैना जति,
देशै डामाडोल थियो, दूर्दसा र क्षति!!
बाबुलाई देश द्रोही भनी कता लगे,
विचरीको सर्वनाश घर एक्लै परे,
दाई थियो आर्की आमा, दुखसुख गरी,
पाँच वर्ष सम्म बाँच्यौँ बाबा बाटो हेरी!!
सोर्ह बर्षे ऊमेरमा दाजै भारत लाग्यो,
बेला बखत् रोजी रोटी, खत् पठाउँथ्यो!
बम्बे भन्ने शहर रे! ठूला ठूला घर,
दुईचार जना चिनेका रे, छैन आफ्ना तर !!
दुनिँयाको सेवा गरिन् भोक प्यास पिऊँदै,
चूलो चाँजो भकारी र ढिकी मानो भर्दै,
जाँतो गाह्रो भारी बोकिन् दिन् रात् नभनेर,
दश बर्षे छोरीको त्यो दुख नदेखेर !
बाबु छुटी घर आए - झ्याल्खाना पो रैछन्
निर्दोषी नै ठहरिए, भगवान तै रैछन्,
परिवारै कैद बन्यौँ कति वर्ष सम्म,
टुक्र्याएको ऐनालाई सकिन्छ कि जोड्न?
वीरभद्र नाऊँ थियो, भद्र वीर थिए,
कुनै कुरा होहल्लामा कैले लाग्दैनथे,
सोझो रैछ बाहादूर नजिकैको माने,
सिपाहीँका रै छ साथी, क्यैले मावो ठाने !
सतीले नै सरापेको देश बल्ल बुझेँ,
आशुँले नै नुहाएर आशुँले नै पुछेँ,
दुखबाट सुरू भयो दर्दमा नै रूझेँ,
कस्तो लेला जीवनले गति मेरो बुझेँ !
बाबालाई नँग्याऊन यौटा हूल आयो,
अगेनाकी आमालाई, आँगनमा ल्यायो,
दश बर्षे छोरी मेरो, के हालत होला?
रूँदै रूँदै धोती च्यापी, सँझेँ शिव भोला!
कुरा गरे खुसुखुसु, आँखा भरी आँशु,
बाबा हेर्थ् कैले यता, छोरी मुटु साँचू,
छोडी दियो धम्की दियो मिलेमतो गरे,
माथीबाट आ का थिए, खोला तल झरे !
सास खुल्यो, रातैभरी आमा बाको गन्थन्,
गाऊँघर छिमेकीले को को रैछ सोध्छन् !
चूपचाप मौनीबाबा कूरा गरेनन् क्यै,
कुभलो ती नचिताई, 'थाहा छैन को खै'
कानून भन्दा माथि छु - ५
कुनै न्यायालय छैन, मेरो पक्ष दिने
तर पनि स्वतन्त्र छु, बाहिर आउने जाने
रोक्दैनन् क्यै घर थर, छैन जेल भित्र
चोर हैन, हत्यारा न, राख्दिन क्यै मित्र !
छाल हाड मासु हेर्छन् सभ्य सभ्यता यो?
दूर्भाग्य भो कठै मेरो, तिम्रो कता गयो ?
असूरको धर्म हुन्छ, नाईनास्ति छैन,
ईन्द्रीयले बलात्कार गर्यो देख्नु छैन ?
गरीबलाई नकूट है, सक्छौ मलाई लूट,
नारीलाई सम्मान द्यौ, कीन रीस, कूट?
नसक्नेलाई हातपात? अत्याचार कीन?
पैसा बोकी आऊ बरू - म छु तिम्री, चिन !
गोर्खालीको देश भन्छौ वीरताको गाथा
केटी हरू बेचिन्छन रे बुद्ध शिव सीता,
मेरा सामु नभन्नु है तिम्रा पूर्वज कुन्?
लाजै हुन्छ सँझदामै बिर्सीदेऊ झन् !
मावो वादी काँग्रेसी र एमाले र झाले
म पनि क्यै कम छैन, हैन दब्ने खाले !
हान गोली बोली सरी, दण्ड माफिक भो,
कुनै वाद भन्दा प्यारो दयालू छ प्रभो !!
तिमी जस्तो नाथे हैन, वकिल् मेरो मै हुँ
राज्यलाई पल्टाईदिन्छु, यदि मैले चाहुँ
'कलगर्ल' र 'प्रस' मेरा भिन्न भिन्न नाम,
कति बिहे, नर्तकी झैँ, रात भरीको काम !
एक्लै गर्छु वकालत,क्यै छ मुद्दा हाल्ने?
श्रीमति छे कचकचे?श्री मान छ पाल्ने!
मलाई छोई हेर,दण्ड? मैले जानेको छु
प्रमाण छ हजारौँको फोटो राखेकी छु!
न्यायाधिस प्रोफेसर नेताहरू सुन्छौ?
पुलिस या गुण्डाहरू,मलाई चिने को छौ?
मेरो पनि पहुँच छ, मान्छे दुईचार् वटा,
बैठकमा बस्यौ होला, म त भित्री कोठा !
आफ्नै मन बुद्धि तिम्रा,नाना कुरा सोच्छ
नमीठोले बोल्यौ भने तिम्लाई कति घोच्छ?
मेरो पनि हृदय छ, दुखः नदेउ है
सक्छौ भने दया गर, हेलाँ नगर है !
हिमालकी पानी हुँ म, पहाड् झरेकी छु,
मन्द मन्द सुस्त चाल नागबेली पर्छु,
भाग्यमानी धर्म साँची-सागरमा लुक्छु
गति रोके ढल बन्छु, बगे गँगा पुग्छु !
'छीटा' हूँ म टूकूचाकी, गल्ली हल्ली बग्छु,
बाँकी ढल सोहोरेर ? फोहोर ती लग्छु,
दूर्गन्ध र अव्यवस्था, स्वास्थलाई हानी,
श्रेय भन्ने धर्म बुझ, प्रेय मनमानी !
ईश्वर हे पानी पार, धोई पाप लग,
बगाई द्यौ शहर त्यो, ग्राम तीर्थ स्थल,
समुद्रको तुफान र आँधीव्याधी आवो,
नयाँ शास्त्र सँविधान नयाँ बस्ती ल्यावो !
नाच्न गाउन आउँछ मलाई,मस्ती जानेको छु,
महँगी छ व्यबहार, सस्ती धानेको छु!
सतित्व के बुझेकी छु, पति छैन मेरो,
ईश्वरमै सुम्पेकी छु, छैन मेरो तेरो !
Posted by Ananta Risal at 12:35 No comments:
भज मस्त राम !
छोडेर मोह मद ती रसलाइ त्याग,
श्रीराम नै छ सबको अबसाथ लाग,
जादू गरेर तिनले, खुद देखिएँ म,
माया नशा सरि अझै? भज मस्त राम !
ती ईश्वरै सगुण नाम कथा लिएर,
लीला छ धर्ती बनमा अनि बन्छ धाम,
प्रारब्ध छैन तर पूर्ण छ दिव्य चोला,
श्रद्धा गरेर मनमा, भज मस्त राम !
गँगा पवित्र गरछिन् अझ कामधेनु,
छर्छन् विचार लग प्रेम छ रश्मि-रेणु,
ज्ञानी विशुद्ध तनका तप योग ग्राम,
सन्ताप ता अब हटुन्, भज मस्त राम !
सम्वेदना लगन है?न त भेद छन् काँ,
सम्पूर्ण खै सहज सून्य रहेछ नौका,
सम्झीरहू नमन शाश्वत रैछ नाम,
बिर्सेर के त गरियो?भज मस्त राम !
हे मित्र हे रघुपते चरणै समाएँ,
लीला कथा सहज झैँ मनमा लगाएँ,
के रैछ? यो भनन सागरमा डुबेँ म,
लैजाउ है शरणमा, भज मस्त राम!
लाने कता लगन साथ म मोडमा छु
जानीन खै भनन है किन हाथ छोड्छु
आधार छैन अब कोहि न रात शाम,
निश्चिन्तले निडर भै भज मस्त राम!
छैनन् ममा अब कुनै घटना र याद,
खै तर्कना? न छ विवाद हटे विषाद,
काटेर लोभ मद क्रोध जसै हजाम,
सोची सतर्क बनदै, भज मस्त राम!
खेती विशुद्ध जनले सब तम्तयारी,
पानी चढाऊ, मल, गोडन, खै हजारी?
आस्था गरेर अब बस्छ जसै किसान,
भू-उर्बरा बन भनी, भज मस्त राम!
सँग्राममा चतुर छन् जन वीर यौद्धा,
'साक्षी छ ईश्वर उनै'-सुन, प्रश्न सोद्धा,
बेला स-धर्म भन मौसम कुन्छ याम?
यो स्वर्ग मिल्छ सजिलै,भज मस्त राम!
शँका गरी कति बिते कति जन्म चित्र,
छाडी तिमी अब कहाँ सबका सुमित्र,
साथी बनाउ नजिकै र गला लगाऊ,
आजै तिमी शहर - राम बनेर आऊ !
- अनन्तगोपाल रिसाल
वसन्ततिलका (त भ ज ज गु गु)
Posted by Ananta Risal at 15:15 No comments:
करेसा बारी र दश फाइदाहरु
यो पटकको करेसा बारी, प्रकृति र मौसमले धेरै कुरा सिकायो ! मैले अमेरिकाको आफ्नै करेसा बारी बाट सिकेका केही मार्मिक शिक्षाहरु -
१. जति किसान हुनुमा रमाईलो छ, त्यति जमिनदार हुनुमा रहेनछ ! जीवनमा कति कमाई भयो भन्दा पनि प्रकृतिमा उत्पादन कसरी, किन र कैले - भन्ने प्रश्नका उत्तर किसानलाई थाहा हुन्छ र तिनीहरुको परिश्रमको सम्मान गर्न सिकिन्छ !
२. कति बिरुवा, फूल, जडिबुटी प्रकृतिमा आफैँ उम्रिन्छन् । तिनका बारेमा अनभिज्ञ हुनु नै अज्ञान रहेछ ! हाम्रो करेसा बारीमा यौटा झार प्रसस्त आउने गर्थ्यो ! यो पटक त्यो बिरुवाको बारे निक्कै अनुसन्धान गरियो ! हुँदा हुँदा त त्यो त - साह्रै मिठो बेथेको साग पो रहेछ ! कम्तिमा पनि तीन छाक खाईयो !
३. घरका फालिएका खानेकुरा, तरकारीका बोक्रा र घर बाहिरका घाँस, पात र हाँगा हरु नै १००% - पुन प्रयोगका लागि काम लाग्दा रहेछन् ! मल, थाङ्क्रा या जाडोका लागि दाउरा बन्ने भएकाले प्रकृतिका यी उपहार हरुको उपयोग गर्न सक्नु पनि - राम्रो समयको परिचालन रहेछ !
४. फूल, तरकारी, बोट बिरुवा विउको संरक्षण गर्नु, स्याहार सुसार, मलजल, गोडनु भनेको केटाकेटीलाई स्याहारेको जत्तिकै महत्वपूर्ण रहेछ! यो पटक तुलसी सम्बन्धी रोचक कथा र प्रसङ्ग छ ! पोहोर सालको विउलाई 'अलुमुनियम tray ' मा १ महिना अघि नै पूजा गरेर घरैभित्र राखियो ! पानी हालेपनि, घाम लागेपनि समय नपुगुन्जेल सम्म केहि आएन ! पछि निर्जला एकादशीमा पो रोप्नु पर्ने थाहा पाएँ ! समय पुगेपछि हरर्र योगिनी एकादशीमा त राम्रै गरी देखियो ! प्रकृतिको समय भनेको आमाले बनाउनु भएको हातको मीठो भान्छाघर र प्रसाद रहेछ !
५. बारी या बोट सानो हुँदैमा थोरै फल्ने भन्ने होइन रहेछ ! यो पटक लालीगुँरास, हरियो पेपर, गोदावरी, मूला र त्यसको साग, भन्टा, बेथे, जिनिंयाँको फूल, सयपत्री, ५ प्रकारका जडिबुटी, ब्रोकाउली, फर्स्री, गोलभेंडा, रायोको साग, धनिंया, झन्डै १०० बोट तुलसी रोपियो, चढाइयो, खाइयो र बाँढियो पनि !
६. करकलो तीन पटक पटक गरि लगाइयो र सबै भन्दा स्यार्नका लागि सजिलो तरकारी रहेछ ! पिण्डालूको टुसाउन लागेको मुन्टो माथी फर्काएर माटो भित्र राखिदिए दिएपछि, महिना दिन भित्र भान्छा घरका लागि तयार! हेर्दा राम्रो हरियो, पात र जरा दुवै खान मिल्ने - र मीठो पनि ! हुँदा हुँदा - अमेरिकामा पहिलो पल्ट मासमा पिनेर मस्यौरा बनाएर पनि १/२ छाक खाईयो !
७. पहिले पहिले छिमेकोको रुखका पातहरुको फोहोर सोर्दा सरापिन्थ्यो, खर्च गरेर पोका किनेर गाँठो पारेर बाहिर फ्याकिन्थ्यो अब ती त आफ्नै करेसा बारीका लागि धन, सम्पत्ती पो रहेछन् ! जाडो हिउँ पर्नु अघि सोहोरेर राखिदिएपछि त आर्को बालीलाई राम्रो मल तयार !
८. बारीमा बिउ र तरकारीले माहुरी, चराहरु, बारुला, लोखर्के, 'ग्राउण्ड-हग'- ठूलो मूसा र बिरालाहरु पनि देख्न पाइयो !
९. घरमा खानलाई शुद्ध तरकारी, भगवानलाई चढाउन बारीको फूल, देख्दा रंगीचंगी हरियो राम्रो, प्यारो र सस्तोमा सस्तो डाक्टर कहाँ जान नपर्ने, किसान योग - मानसिक चिकित्सा आदिको कति हो कति फाइदा ! तर अलि अलि झिंगा र लामखुट्टेलाई कसरी पुरै निराकरण गर्ने भनेर अर्को वर्षलाई राखेको छु !
१०. यो वर्ष शौखका रुपमा भएपनि धेरै मन मिल्ने साथीहरु बने ! प्रमोद भिनाज्यू र नम्रता दिदीहरुको धेरै देखासिकीले बारीमा प्रेरणा मिल्यो ! उज्जल भट्टराईले पठाई दिएको तुलसी दलले बारीमा ढकमक्क झुल्ने मौका पायो ! जनार्दन ढुंगाना ज्यूको जडिबुटी सम्बन्धी ज्ञानले पनि धेरै जागरुकता गरायो! बिना दिज्यूले बनाउन सिकाउनु भएको करकलाले अब कति समय सम्म त्यसको मिठास झुण्डिने हो !! ल, यो प्रकियालाई गतिशीलता दिन तपाईहरुको पनि साथ चाहिन्छ है, यहाँ हरुको अनुभव पनि सामूहिक गर्नोस्, हामीलाई पनि सिक्ने' मौका दिनोस् !!
Posted by Ananta Risal at 09:58 No comments:
सनातन धर्ममा ऊत्सव: तिथि योग पर्व चाड सँस्कार
सनातन धर्मको विषेशता भनेको यस भित्र रहेका ऊत्सव विधि, मौसम अनुसारको हर्षोल्लास, चिरकालिन महोत्सव र मँगलमय समारोिहक आध्यात्मिक योगका विभिदता हो! हरेक पललाई ईश्वरीय सँस्कारसँग जोडेर हर निमेष मँगलमय बनाऊनु, भोगमय भनि ठानिएको जगतलाई योग मय बनाउनु नै यसको मूल उद्देश्य हो ! सनातन धर्म अस्वस्थ वृक्ष हो ! यसको जरो यति वृहद छ कि यसमा सबै हाँगा अटाऊँछन् ! कुनै पनि हूरी बाढी आँधी या तूफानले हल्लाउन सक्दैन! यस मध्ये पनि यी सान्दर्भिक अनुष्ठान आदि त्योहारको व्यष्टि विशेष (१६ सँस्कारहरू गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म,
नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म विद्यारम्भ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ,
केशान्त, समावर्तन, पाणिग्रहण, अन्त्येष्टि) र समष्टि विशेषको प्राधान्यताका बारेमा कुरा त गर्नै पर्छ ! हरेक विशेष तिथि नै सनातन धर्मको प्रामाणिक ईश्वरसँग तादात्म्यता गर्ने विधि हुन् र तिनै परमात्मा परमेश्वरको श्री, योग र शास्वत दर्शन गराऊन हामी मानवका लागि सँस्कार र आस्थामा चिरस्थाई बनाऊन, सँझाऊन आधारशिला प्रतिकका रूपमा बिभिन्न ग्रह काल दशा र दिशा लिएर आऊँछन् ! विभिन्न देवतालाई पूजा रूपमा चढाईएको फल अन्तमा परमात्मामै जाने भएकाले सनातन सभ्यताको विशेष महिमा छ !
सनातन धर्ममा वर्ण, आश्रम, लिँगको जति वैशिश्ष्टता छ त्यति नै मन्दिर मूर्ति पूजा कर्म भजनको अधिकारी भेद अनुसार विधि, नियम, पालन र कर्तव्यको पनि ! जुनै वर्ण या वर्ण बाट बाहीर रहेर ईश्वरीय भाव सजिलै आर्जन गर्न सकिन्छ! जनै पूर्णिमा, दशैँ, लक्ष्मी पूजा, होली आदि वर्ण विशेष त्योहार हुन् भने - विभिन्न आश्रममा (विद्या,अर्थ,धर्म, मोक्ष आर्जन) रहेर या बाहिरै बसेर पनि भगवान सँग योग गर्न सहज छ । कुनै गुणद्वारा पनि प्रेमले प्रभुको पूजा गर्न सरल छ ! अझ ती गुण भन्दा पनि पर बसेर ईश्वरको अनुशासन भित्र रहेका जो सन्यासी, साधु, ऋषि, महात्मा, ज्ञानी पुरूषहरू छन् - ऊनीहरूको आचरण, लवाई खवाई, दिनचर्या कस्तो हुनु पर्छ भनेर शाष्त्रमा स्पष्ट सँग निर्देसित छ! कोहिपनि मनमानी चल्न नपाउने ट्राफिकको नियम जस्तै पारदर्शी र सबैलाई समान छ ! हैन, म नियम भन्दा बाहिर बस्छु र हृदयैमा आत्म भावले अहँकार समर्पण गर्छु भन्नेलाई त भगवान आफ्नो सबै भन्दा प्रिय दर्जा दिनुहुन्छ ।
सनातन धर्ममा मानवलाई मात्रै हैन - देवता दानव र पशु पन्छी कीरा कीताणु आदिलाई पनि यथा स्थान दिईएको छ! यौटा सानो कमिला कति टाढा बाटै सूँघ्न सक्छ भने यौटा साधारण चील सयौँ योजन सम्म देख्न सक्छ! त्यस्तै मूसा, भ्यागुतो, साँप, खरायो, मजूर, मृग, हात्ती, कुकुर, गाई जस्ता अनगिन्ती प्राणी छन् - जसलाई हामी जान्न खोजेर पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ र तिनको शक्ति, गति, वैशिष्ट्यताको प्रामाणिकताको खोज गर्न सक्दैनौँ!
यी व्रह्माण्डमा भएका अन्तरिक्षका देवता, ऋषिहरू - भूलोकका प्राणीहरू र अन्तरात्माका परमात्मालाई हार्दिक नमस्कार गर्ने परँपरा अनुसार सनातन धर्मले हुँदाहुँदा आकाश, वायू, अग्नि, जल र पृथ्वीका ढुँगा माटो बनस्पति सारालाई नमन र स्मरण गर्न सिकाऊँछ ! हरेक पल चाहाड र हरेक दिन तिथि हुने यस्तो धर्ममा कुनै कुराको कमि के होला त?
वैदिक धर्मले भन्छ - कुनै यस्तो स्थान छैन जहाँ प्रभू परमात्मा नरहोस्, यस्तो बस्तु छैन जहाँ परमात्माको चरण स्पर्श गर्न नसकियोस्, यस्तो रूप छैन जहाँ ईष्ट देव ईश्वरको दर्शन मिल्न नसकोस्, यस्तो भोजन छैन जुन भगवानलाई चढाएर प्रसाद बन्न नसकोस् , यस्तो बास्ना छैन जुन भगवानमा समर्पित गरेर सुगन्ध नदेवोस्, सनातन धर्म यति पावन छ कि - जहाँ यस्ता कूनै पाप गरेर तिनलाई शुद्ध र प्रायश्चित गर्न नसकियोस् ! कुनै यस्तो जप तप यज्ञ छैन जुनको प्रभावले समस्त पाप नडढोस् ! सनातन धर्मकी जय !!
Posted by Ananta Risal at 07:49 No comments: